Semalt waxay sharraxaysaa aasaasiga baaritaanka SEO ee farsamada farsamada
Hantidhawrka raadinta raadinta (SEO) wuxuu qiimeynayaa haddii websaydhku yahay SEOsaaxiibtinimo iyo arimaha waa in la hagaajiyaa. Waxay xaqiijineysaa in goobtaasi si fiican loo hagaajiyo dhammaan isbedelada ka dhacaya warshadaha.Hantidhowrka SEO waxaa ka mid ah farsamada, bogga, bogga, khibradda tartanka iyo baaritaanka ereyga ee muhiimka ah.
Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare Adeegyada Digital, Jack Miller wuxuu sharaxayaa waxa baaritaanka SEO, sida loo ordo iyo sababta ay muhiim u tahay kobcinta boggaga internetka.
Muhiimadda Audit SEO
Sida ugu dhakhsaha badan Google ayaa si joogto ah u cusbooneysiiya jumlada kaalinta iyo contentshuruudaha, ganacsatadu waxay u baahan yihiin inay si deg deg ah uga jawaabaan isbeddelkaan si ay u sii wataan tartan. Falanqaynta baaritaanka waxay kuu ogolaaneysaa inaad sii kordhiso goobtabooqasho iyo gacan ka geysashada sidii loo sii wadi lahaa isbedelka warshadaha. Waxa kale oo ay ku haboon tahay markaad billaabayso inaad bilowdo mashruuc cusub
Gaaritaanka Websaydhadu waa inay lahaadaan makiinado iyo matoorowaa inay lahaadaan helitaan. Miyaad ku guul darreysaa tallaabadan, makiinadda raadinta ma awoodi doonto inaad ku dhufato content, taasoo si xun u saamayn doontadarajo. Si kastaba ha noqotee, qalabka Robots.txt ayaa si sahlan u xallin kara dhibaatada adoo eegaya bogag kasta oo laga xannibay taranka. Waxaa sidoo kale ku jirabaaritaan ku saabsan aqoonsiyada HTTP. Marka laga hadlayo kicinta (bogga bogga), falanqaynta farsamadu waxay caawineysaa in dib loo soo celiyobogagga asalka ah. Dhamaan bogagga waa in ay isku xirnaadaan si loo hubiyo in qofna uusan haysanin si ay u cararaan iyaga oo aan ka boodin.
Dhexdhexaadin Hubinta helitaanku waxay hubinaysaa in makiinadaha raadintahel mawduuca. Tirada sii kordheysa ee bogagga la helay waxay ku sifeyneysaa qiimeynta goobta, taas oo hagaajinaysa xaaladda mashiinkasafka
Waxqabadka Sahlan Xawaaruhu waa mid aad uwanaagsanMuhiim maadaama dadka badankood aysan sugeynin bogga si ay u qaadaan haddii ay qaadato waqti dheer gaar ahaan xiriirka internetka oo gaabis ah. Wuxuu saameeyaa tirada booqashada booqashada..
Qaadashada SEO Audit
Khabiiro SEO ah, sida wakaaladeena, waxay sameeyaan baaritaan qoto dheer iyadoo la isticmaalayo qalabiyo codsiyada. Sahaminta qayb kasta oo ka mid ah goobta, waxay diyaariyaan warbixinta tilmaamaysa dhammaan arrimaha ay ka heleen, oo ay soo jeediyaan talooyinkaku saabsan sida loo yareeyo dhibaatada.
Qalabka la isku haleynayo ee loogu talagalay xisaabinta SEO
Waxa jira dhowr qalab oo lagu sameeyo baadhitaanka SEO. Waxay yihiin waqti-qaadashada,sidaas darteed waxay u baahan tahay dulqaad, saxsanaan, iyo fikirka istaraatiijiga ah. Doorashadan waxaa loogu talagalay oo keliya shakhsiyaadka isku kalsoon oo leh xirfado farsamo oo xoogan.
Qalabka Farsamada Farsamada
Cabsida Kurbeellada ama Xenu Waxay eegaan tirada lafilayobogagga, gartaan sharciyeynta, dib-u-qabadka gudaha, iyo dib-u-dhajinta
IIS SEO Toolkit Wuxuu falanqeynayaa helitaanka goobtaiyo waxay ku talineysaa sida loo sameeyo mashiinno badan oo saaxiibtinimo.
Nabadgelyo Adeegyada Digital Khubarada ayaa falanqaynaya farsamada labadabaiyo qaybaha kooban ee bogaadinta SEO-gaaga, waxay ku siinayaan warbixinta iyo talooyinka.
Pingdom DNS Check Wuxuu caawiyaa qaladka saxda ah, caafimaadka DNS, iyo xalinta dhibaatooyinka DNS server
Builtwit Wuxuu hubiyaa qaab dhismeedka domainka iyo warbixinnada ku saabsan arrimaha qaabka la xiriira SEO.
GTmetrix Qalab muujinaya waxyaabaha keena websitekaload gaabis ah. Waxaa sidoo kale ku jira taariikhda xawaaraha haddii la isticmaalo kahor.
Qalabyada Google Websaytiyaha Aqoonsiga arimaha bogga,links iyo caafimaadka farsameed ee bogga
Marka la sameynayo hanti-dhawrka SEO ee bogga, hubso in dhammaan qodobbada la tixgeliyo.Murugada iyo habka isdhaafka ah ee lagu falanqeynayo falanqaynta ayaa ah qodobbada ugu muhiimsan ee keena guusha baaritaanka. Sawiraaddanatiijooyinka falanqaynta farsameysan, waxaad ku horumarin kartaa istaraatiijiyada SEO ee saxda ah ee loogu talagalay kobcinta bogga kale.